सरकारी ढुकुटी र लडाकुको दुरुपयोग गरी नेकपाले पुनः निर्वाचन पनि जित्यो भने के गर्ने ? –गुरुराज घिमिरे (अन्तरवार्ता) | suryakhabar.com
Home कुराकानी सरकारी ढुकुटी र लडाकुको दुरुपयोग गरी नेकपाले पुनः निर्वाचन पनि जित्यो भने के गर्ने ? –गुरुराज घिमिरे (अन्तरवार्ता)
on: २७ चैत्र २०७५, बुधबार १०:११ In: कुराकानीTags: No Comments
पछिल्लो निर्बाचनमा काँग्रेसको स्थानीय-तह, प्रदेश-सभा र प्रतिनिधि सभामा भएको हार र पछिल्लो राजनीतिक परिभेषका विषयमा नेबिसंघका पुर्व-अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेसंग सुर्यखबर प्रतिनिधिले गरेको छोटो कुराकानीको अँशः
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेसनको आवश्यकता छ कि छैन ?
नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । इतिहासको महत्वपूर्ण समयमा छौं । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । हामीले संविधान जारी गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत पनि गरेका छौं । सबै काम नेपाली कांग्रेसले ग¥यो । तर निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको पक्षमा रहेन । अबको प्राथमिकता भनेको पार्टीलाई बलियो बनाउने नै हो । पार्टीले निर्वाचनमा परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार नहुनुका विभिन्न कारण थिए । जसमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरी, संगठनात्मक संरचना, निर्णय प्रक्रियामा मनोमानी आदि कारणहरु थिए । नेताहरुको मनोगत चाहना पनि कारक बने । जसका कारण गौरबपूर्ण निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुन सकेन । पार्टी सभापतिकै भूमिका अहम् हुन्छ । जुन हुन सकेको छैन । अहिले पार्टीमा बृहत एकताको आवश्यकता छ । महासमितिको बैठकमा उहाँले जिल्ला सभापतिहरुलाई आश्वासन दिनु भयो । केन्द्रीय समितिमा लगेर उल्ट्याउनु भयो । नेतृत्वले नसकिने कुरालाई आश्वासन दिन हुँदैन । सभापतिले यो यो कारणले व्यवस्था बदलिदैन भन्न सक्नु पर्छ । एउटा केन्द्रीय सदस्य मेचीदेखि महाकाली दौडिन्छ । उसको दायित्व सबै जिल्लामा हुन्छ । अनि फेरि वडाबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्दा अवस्था के हुने त ? वडावडामा गुट सिर्जना हुन्छ । केन्द्रीय सदस्य हुञ्जेल त हो प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने । पार्टीका लागि व्यवस्था फेर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । यो कुरा पार्टी सभापतिले बुझाउन सक्नु पथ्र्यो ।
जिल्ला सभापतिहरुले मात्रै होइन केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ नी ?
केन्द्रले निर्णय गरोस् अनि हामी मत राख्छौ भन्नु भएको छ धेरैले । मत राख्छौं भन्नुको अर्थ चाहिँ केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय चित्त बुझेको छैन भन्नु हो । नोट अफ डिसेन्ट भनेको निर्णयको विरोध होइन । निर्णयका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नु हो ।
महासमितिमा जे निर्णय भयो, त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा उल्ट्याइयो । त्यसकैको अभिव्यक्ति नै नोट अफ डिसेन्ट होइन र ?
उहाँहरुको मत के थियो भने महासमितिबाट केन्द्रीय समितिमा आएको कुरालाई केन्द्रीय समितिले सदर गर्नु पर्छ भन्ने थियो । केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि तलैबाट लडेर आउनु पर्छ भन्ने मत थियो । केन्द्रीय समितिमा त्यो मतको प्रतिकुलमा निर्णय भयो । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अवैध होइन । त्यसको परिणामस्वरुप नोट अफ डिसेन्ट लेखियो ।
महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ?
मूल कुरा त महासमिति आफैंले निर्णय गर्नु पर्ने थियो । केन्द्रीय समितिमा पठाउनु हुँदैन थियो । विधान संशोधनको विधान महासमितिमा लगियो । त्यो प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य तलैबाट लडेर आउनुपर्छ भन्ने बुँदा थिएन । त्यहाँ तलैबाट लडेर आउनुपर्ने माग उठ्यो । रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं भन्नुभयो । त्यसपछि यो विषय केन्द्रीय समितिमा आएर उल्टियो । दुवै नेताले आश्वासन दिएको जिल्ला सभापतिले बुझे । तर केन्द्रीय समितिले पुरानैलाई ठीक मान्यो ।
नेपाली कांग्रेसको शीर्ष तहबाट कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुलाई उचाल्ने काम भइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि विषय बाहिर आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
जिल्ला सभापतिहरु आफै पनि विवेकशील हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई उचाल्ने काम भएको भन्ने लाग्दैन । तर कसै न कसैले ब्याकिङ गरेकै छ । जसका आधारमा उहाँहरु यी विषय ल्याउनु भएको हो । यो कुरामा कुरा चपाउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
सरकारलाई लाइनमा ल्याउनु पर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेस आफै आन्तरिक झमेलामा फसेको होइन ?
बिपी कोइराला, गणेशमान, किशुनजी देखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म हुँदा हामीले एक प्रकारले सानिध्य पायौं । विपीसँग त काम गर्न भ्याएनौं । उहाँहरुको कार्यशैली फरक थियो । राष्ट्रिय परिस्थितिको अध्ययन गरेर पार्टीको रणनीति तय हुन्थ्यो । केन्द्रीय समितिमा पनि त्यही अनुसार कार्यक्रम तयार हुन्थ्यो । अहिले पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच गम्भीर विवेचना नै हुँदैन । आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न सभापतिलाई लाज हुनु हुँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि विशेष महाधिवेशन चाहियो भन्न सकिन्छ । पार्टी सभापतिलाई हटाउनुपर्छ भन्न सक्छु । त्यो कुरालाई कतिपयले मन पनि पराउन सक्छन् । एक त हाम्रो पार्टी खुम्चेर ७३ सिटमा आएका छौं । २६३ सिटमा हामी जम्मा ७३ सिट छौं । समानुपातिक नजोड्ने हो भने हामी तेस्रो हो । अर्थात २३ सिट मात्रै हो हाम्रो प्रत्यक्षको सिट । काँग्रेसको यो अवस्था किन आयो गहन ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।
पार्टीमा अन्तरघात गर्नेलाई किन कारबाही हुँदैन ?
अहिले पार्टीलाई व्यापक रुपमा एकताबद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन भएकै डेढ वर्ष हुन लागेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा हारेका छौं । नेतृत्वले कार्यकर्तालाई न्याय गरेन । एउटै कार्यकर्ताले सधै जिल्लामा अवसर पाउने स्थिति छ । अवसर खोज्ने बेला सधैका पुरानैले अवसर पाइरहने स्थिति छ । अनुशासन समितिले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले अनुसशान त्याग्न मिल्दैन । सेना र पार्टीले सधै अनुशासन कायम राख्नु पर्छ । अनुशासन समितिले पनि पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नुपर्छ । अनुशासन समिति भनेको न्यायिक समिति पनि हो ।
नेबिसंघको अवस्था किन यस्तो भयो? तपाई त नेविसंघको पुर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
नेबिसंघको अधिवेशन समयमा नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, नेबिसंघको अधिवेशन समयमा नभएर लाथालिंग र भताभुगं भएको हो ।
अनुशासन समिति त सधै बन्छ । तर काम गर्न सक्दैन, बन्नुको के अर्थ होईन र ?
नयाँ पुस्ताका साथीहरु हुनुहुन्छ समितिमा । धेरैजसो युवाहरु नै हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीको परम्परा अनुसार उहाँहरु अनुशासन समितिमा हुनुहुन्छ । ६० नकाटेका नेताहरु युवा नै हुन् । बुढाहरुले गरेनन् रे । तर युवाले पनि गरेनन् भने कोमाथि विश्वास राख्ने ? मलाई विश्वास छ युवाहरुले केही गर्नुहुन्छ ।
कांग्रेसभित्र सिटौलाको गुट, प्रकाशमानको गुट, सभापति देउवाको गुट, पौडेलको पनि गुट नै । सबै मिलेर अब गुटका लागि होइन, कांग्रेसका लागि काम गरौं भनेर उहाँहरु किन भन्न सक्नुहुन्न ?
– राष्ट्रिय अवस्था हेरेर पहिले पहिले पार्टीको नीति बनाइन्थ्यो । मेलमिलापको नीति लिएर विपी कोइराला नेपाल फर्किँदा सिक्कीमको सार्वभौमिकता समाप्त भइसकेको थियो । पाकिस्तान टुक्रा पारिसकिएको थियो । उहाँले १० वर्षअगाडि भविष्यवाणि गरिसक्नु भएको थियो । १० वर्षमै सिक्कीम र पाकिस्तानबारे बताइसक्नु भएको थियो । अबको पालो भारतले नेपालमाथि आँखा लगाएको बुझेर उहाँ नेपाल फर्किनु भएको थियो । यो बे्ला कम्युनिष्टले देश कब्जा गरेको छ । यो बेला हामीले गर्ने काम के हो ? यो बुझेर सभापतिले छलफल चलाउन आवश्यक भइसकेको छ । अहिले हामी कहाँ छौं भन्ने हेक्का सभापतिलाई छैन । गएको निर्वाचनमा त हामीले हार्यौं । अर्को निर्वाचनमा पनि जित्छौं भन्ने के छ त ? कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो रवैया देखायो भने फेरि पनि चुनाव हार्न सक्छौं । सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्यो भने के गर्ने ? हिजोका लडाकुलाई प्रयोग गरेर जित्यो भने के गर्ने ? कुनै पनि पार्टी निर्वाचनमा हार्यो भने अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । ठोस कार्यक्रम लिएर जानु पर्छ । त्यो पनि गरेनौं । ५२ पेजको सुझाव ल्यायौं । तर हामीले दिएको सुझावका बारेमा कुनै छलफल नै भएन । हामीले भनेको कुरामा छलफल भएन । तर त्यो सुझावका विषयमा तीखो टिप्पणी गरियो । ६४ सालमा माओवादीले चुनाव जित्यो । हामीले हार्यौं । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाईसमेत बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । अहिलेको नेतृत्वमा त्यस्तो केही छैन । नेतृत्वले काँग्रेस, लोकतन्त्र र देशको चिन्ता गर्न सकेको देखिएन ।